သွေးတိုးရောဂါ ရှိသူတိုင်း သိထား သင့်တဲ့ သွေးတိုးကျစေတဲ့ အစားအ စာများ။ – XB Media Myanmar
သွေးတိုးရောဂါရှိနေပြီလို့ သိလိုက်တာနဲ့ လူအများစုဟာ သွေးကျဆေးသောက်ဖို့ကိုပဲ အာရုံရှိကြပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ စားသောက်နေထိုင်မှု ပုံစံတခုကို ပြောင်းနိုင်ရင် သွေးတိုးရောဂါကို ဆေးဝါးမသုံးစွဲဘဲဖြစ်စေ၊ ဆေးဝါးအကူအညီ အနည်းငယ် ယူရုံလောက်နဲ့ ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါတယ်။
အခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ သွေးတိုးရောဂါ ရှိသူတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ သွေးတိုးခြင်းကို ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်တဲ့ အစားအစာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အစိမ်းရောင်ရှိတဲ့ အသီးအရွက်တွေဟာ ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ် ကြွယ်ဝတာကြောင့် သွေးတွင်းဆိုဒီယမ်ဓာတ်များခြင်းကို ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်ပြီး သွေးတိုးခြင်းနဲ့ ရုတ်တရက် သွေးပေါင်အလွန်အမင်းတက်ခြင်းတို့ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ငှက်ပျောသီးဟာဆိုရင်လည်း ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ် ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာတမျိုးဖြစ်တာကြောင့် သွေးတိုးခြင်းကို ထိန်းချုပ်ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
နေ့စဉ် စားသောက်မှုပုံစံမှာ ကြက်သွန်ဖြူကို ဟင်းလျာတွေထဲ ထည့်ချက်ခြင်းထက် အစိမ်းလိုက်စားပေးခြင်းက သွေးတိုးခြင်းကို ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Ref. www.healthline.com,Credit-ဟယ္လ္သင္(ဧရာဝတီ), The Irrawaddy-Burmese Editon
ငှက်ပျောသီးဟာဆိုရင်လည်း ပိုတက်ဆီယမ်ဓာတ် ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာတမျိုးဖြစ်တာ ကြောင့် သွေးတိုးခြင်းကို ထိန်းချုပ်ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ငါးမှာပါဝင်တဲ့ Omega3 Fatty Acid နဲ့ ပရိုတင်းဓာတ်တွေဟာ သွေးပေါင်တက်ခြင်းကို လျော့ကျစေနိုင်ပြီး သွေးတိုးရောဂါနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ တခြားသော ရောဂါတွေ ဖြစ်နိုင်ခြေကို လည်း လျော့နည်းစေပါတယ်။
Ref. www.healthline.comCredit-ဟယ်လ်သင်(ဧရာဝတီ), The Irrawaddy-Burmese Editon
ခွလေကျထုံကဉြျသူမြားအတှကျ ကိုယျတှေ့ပြောကျခဲ့သညျ့ မွနျမာေ ဆး နညျး